Python Software Foundation Inozivisa Kupera Zuva rePython 2 Tsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Kubva kuburitswa kwePython 3.0, la Python Software Foundation yakatanga kupa mazano kune vanogadzira kusiya shanduro dzekare yemutauro wechirongwa uchifarira iyi yazvino vhezheni.
Kurume apfuura, Guido van Rossum, musiki uye mutungamiri weprojekiti Python mitauro yemutauro, yakazivisa kuti kutsigirwa kwePython vhezheni 2.7 kuchapera muna Ndira 1, 2020. Mushure meiyi nguva yekupedzisira, Python 2.7 haichazobatsirike kubva kune chero zvigadziriso, kunyangwe zvekuchengetedza zvigamba.
Ichi chirevo chekupedzisira chevagadziri ndichiri kurega kubva kutamira kuPython 3, kunyangwe zvichiri kukwanisika kune vanozvimiririra vanogadzira forogo Python 2.7 kuve nechokwadi chekuenderera. Asi kuna Guido van Rossum, hazvichadiwe kumirira iye nechikwata chake kuti vagamuchire zvidzoreso kana kunyange sarudzo dzine chekuita nekusimudzira kwePython 2.7.
Mushure mekuziviswa kwaGuido van Rossum, aive nechokwadi chekuti chiziviso chepamutemo chichaitwa munzira imwechete.
Uye saka zvaive kubva ipapo iyo Python Software Foundation (PSF) yakazivisa izvozvo
"Ndira 1, 2020 rinenge riri zuva rekuti Python 2 ichapedza. Izvi zvinoreva kuti hatisi kuzozvivandudza mushure mezuva iro, kunyangwe kana paine munhu ane dambudziko rekuchengetedza. Inofanirwa kuenda kuPython 3 nekukurumidza. "
Takaburitsa Python 2.0 muna 2000. Makore mashoma gare gare takaona kuti taifanira kuita shanduko huru kuvandudza Python. Saka muna 2006, takatanga Python 3.0. Vanhu vazhinji havana kugadziridzwa, uye isu hatina kuda kuvakuvadza. Saka kwemakore mazhinji takaenderera mberi nekuvandudza nekutsikisa Python 2 uye Python 3.
Mukushambadzira vanotaura kuti kune zvinhu zvakawanda izvo Python 2 isingakwanise kubata. (kutora sereferensi zvinoitwa ne Python 3) pamwe nevagadziri vanofanirwa kupatsanura kuedza kuramba uchitsigira Python 2 na3 apo zvakanakisa kungova neshanduro imwe yekutarisa.
Tinorangarira izvozvo iyo Python Software Foundation inoumbwa nevanozvipira kukurudzira, kuchengetedza uye kutsigira kufambira mberi kwePython chirongwa chemutauro, pamwe nekutsigira uye kufambisa kukura kwenharaunda yepasi rose yevagadziri vePython.
Zvinoenderana nenheyo, danho iri rakaitwa kubatsira vashandisi vePython. Kuti unzwisisane zvirinani, iyo hwaro inopa inotevera tsananguro:
"Takaburitsa Python 2.0 muna 2000. Makore mashoma gare gare, takaona kuti taifanira kuita shanduko huru kuvandudza Python. Saka muna 2006, takaburitsa Python 3.0. Vanhu vazhinji havana kugadzirisa uye isu hatina kuda kuvakuvadza. Naizvozvo, kwemakore mazhinji, takaenderera mberi nekuvandudza nekutsikisa Python 2 uye Python 3 «.
"Asi izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kugadzirisa Python." Pane zvigadziridzo izvo Python 2 isingakwanise kubata. Uye isu tine nguva shoma yekuvandudza nekukasira Python 3. Uye kana vanhu vazhinji vakaramba vachishandisa Python 2, Python vanozvipira mukugadzira software vanotambura. Ivo havagone kushandisa izvo zvitsva zvinhu mu Python 3 kusimudzira maturusi avanogadzira.
"Hatina kuda kukuvadza vashandisi vePython 2. Saka muna 2008 takazivisa kuti tichave tichimira Python 2 muna 2015 uye tichikumbira vanhu kuti vasimudzire kuPython 2 nguva iyoyo isati yasvika."
Vamwe vakadaro, vamwe havana. Saka mu2014, takawedzera uyu musi wekupedzisira kuenda 2020. Asi kubva muna Ndira 1, 2020, iyo PSF inozivisa kuti Python 2 rutsigiro runopera.
Kune vanhu vanoomesa musoro vachiramba vachishandisa Python 2 mushure mezuva iro, iyo nheyo inoratidza kuti kana ivo "vakasangana nematambudziko ekuchengetedza zvine njodzi mu Python 2 software ″, vanozvipira [PSF] havasi kuzobatsira.
«Zvimwe zvezvinetso izvi zvichatanga muna Ndira 1. Zvimwe zvinonetsa zvichawedzera nekufamba kwenguva, "inoyambira kudaro PSF.
Nekuramba uchishandisa Python 3, "iwe ucharasikirwa nemikana yako yekushandisa maturusi akanaka nekuti anongoshanda muPython 3 uye zvinodzora pasi vanhu vanovimba nekushanda newe."
Zve software yakanyorwa mu Python 2, PSF inokurudzira kushandisa Python 3 maturusi ekushandisa. Vamwe vanogadzira avo vakachinja kubva kuPython 2 kuenda kuPython 3 vanoti ndiyo shanduko yakapusa kuita.
Iko kune raibhurari yekubatsira vanogadzira kufambisa kodhi yavo kuenda kuPython 3 uye mune zvese zviitiko, zvinokwanisika kunyora Python 2 ne3 kodhi inoenderana, inotaura mumwe mugadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Python Software Foundation Inozivisa Kupera Zuva rePython 2 Tsigiro
Zvinotaridza sesarudzo yehungwaru, tanga tiine nguva yakakwana yekutama